छोरी किन नचाहिने ? « Janata Samachar
छोरी किन नचाहिने ?
प्रकाशित मिति :2December, 2018 7:19 pm
हामीलाई आमा चाहिने, स्वास्नी चाहिने, दिदी अनि बहिनी पनि चाहिने । प्रेमिका पनि चाहिने । तर छोरी किन नचाहिने ? आमा, बहिनी, स्वास्नी, प्रेमिका पनि त कसैका छोरी नै हुन् । सायद उहाँहरुको परिवारले पनि यो सोच राखेर छोरी चाहिएन भनेका भए समाज के हुन्थ्यो होला ? समाजमा छोराछोरीमा विभेद धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ ।
आमाको गर्भमा नौ महिना रहन्छन् जन्मँदा छोरा होस् या छोरी । छोराजस्तै छोरीले पनि आमाको दूध खाएर नै हुर्कन्छन् । तर छोरालाई काख र छोरीलाई पाखा कायमै छ । छोरा जन्मिँदा खुशियाली मनाइन्छ भने भोजभत्तेर नै चल्छ । तर छोरी जन्मिँदा अधिक जिम्मेवारी, दायित्व बोध हुन्छ अभिभावकलाई । चिन्ता बढ्छ । भविष्यमा हुने खर्चलाई लिएर अभिभावको निधार खुम्चिन्छ, चाउरिन्छ ।
मुखले त औपचारिकता निभाउँछौँः छोरीलाई लक्ष्मी सम्बोधन गरेर । तर त्यही लक्ष्मी गर्भमा छ भन्ने पत्ता लाग्ने बित्तिकै भ्रुणहत्या गर्न पनि आत्मा मान्छ । हात काँप्दैन । मैथिलीमा एउटा भनाइ पनि छ, ‘बेटा होइछै त सावा हाथ धर्ति उपर होइछै आ बेटी होइछै त सवा हाथ जमिन धसैछै ।’ के यो भनाइ सत्य हो ? कसैले हेरेको छ अथवा महसुस गरेको छ ? जमिन माथि वा तल हुन्छ कि हुँदैन ? किन यति धेरै विभेध छोरीलाई ?
जब छोरासरह छोरीले पनि हरेक काम गर्न सक्छे । छोरी घरको कामकाजदेखि बाहिरी दुनियाँमा पनि राम्रो गर्न सक्छे । छोरी, आमाबुबा आफनो परिवारको हेरविचार, घरको काम र बाहिर जागिरमा पनि अब्बल देखिएकै छन् । वश मौका पाउनु पर्छ छोरीले । मौका, परिवारको साथले छोरासरह समाजमा उत्रन सक्ने छोरीको कमी छैन समाजमा । विमान चालक, सुरक्षा दस्ता, शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारमा पनि छोरीको सफलता खोज्न अब देश, प्रदेश र स्थानीय तहमा यथेष्ट हस्ताक्षर जन्मिइसकेका छन् । राजनीतिमा पनि छोरी पुस्ताको ख्याति उस्तै छ । छोरीसँग किन घृणा र नफरत अनि आमाको गर्भमै हुँदा नै परलोक पुर्याँउछौँ ? उसले बाँच्न पाउने अधिकार पनि खोस्छौँ किन ? जबकी छोरीले अस्तित्वका लागि हरेक क्षेत्रमा प्रमाणित गरेको छ ।
भ्रुण हत्या नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन त छ तर पनि अहिले सम्म यस्को विरोधमा कडाइका साथ पालना भएको छैन । त्यसैले भ्रुणहत्या जस्ता जघन्य अपराध रोकथाम गर्न अल्ट्रासाउन्ड सेन्टरमा विशेष निगरानी आवश्यक छ ।सँगै छोरीको जन्म योजनालाई सकारात्मक प्रचार प्रसार जरुरी छ । भ्रुण हत्या गर्ने र गराउने कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ । त्यसैले छोराछोरीमा विभेद होइन् बरु हाम्रो समाजले सोच बदल्न आवश्यक छ । छोरीलाई पनि छोरासरह शिक्षादीक्षा दियौँ भने छोरीले पनि सफलताको शिखर चुम्न सक्छे ।
हामीलाई आमा चाहिने, स्वास्नी चाहिने, दिदी अनि बहिनी पनि चाहिने । प्रेमिका पनि चाहिने । तर छोरी किन नचाहिने ? आमा, बहिनी, स्वास्नी, प्रेमिका पनि त कसैका छोरी नै हुन् । सायद उहाँहरुको परिवारले पनि यो सोच राखेर छोरी चाहिएन भनेका भए समाज के हुन्थ्यो होला ? समाजमा छोराछोरीमा विभेद धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ । यो मानसिकता बदलिन जरुरी छ । समाज उँभो लाग्न देश गतिमा हिँड्न छोरीमा विभेद पहिलो शर्त बन्नुपर्छ अब ।
जब छोरासरह छोरीले पनि हरेक काम गर्न सक्छे । छोरी घरको कामकाजदेखि बाहिरी दुनियाँमा पनि राम्रो गर्न सक्छे । छोरी, आमाबुबा आफनो परिवारको हेरविचार, घरको काम र बाहिर जागिरमा पनि अब्बल देखिएकै छन् । वश मौका पाउनु पर्छ छोरीले । मौका, परिवारको साथले छोरासरह समाजमा उत्रन सक्ने छोरीको कमी छैन समाजमा ।
जग नहसाऊ कांग्रेस
कांग्रेसको मुहान दुषित भएकाले नेता कार्यकर्ता अलमलमा छन् । सामुहिक रुपमा एकतावद्ध भएर देश र
एचआइभी परीक्षण गराऔँ
विश्वभरका देशहरुमा जस्तै नेपालमा पनि हरेक वर्ष डिसेम्बर महिनाको १ तारिकलाई ‘एचआइभी परीक्षण गराऔँ, आफ्नो